मर्मत गर्न प्राप्त, अर्डर सामाग्री को सही राशि किन्न र अनुमान निर्माण टोली भाडामा छन् जाँच गर्न काम को राशि को एक राम्रो समझ हुनुपर्छ। हामी एउटा कोठा को क्षेत्र मापन गर्न कसरी एउटा लेख प्रस्ताव।
जो आज हरेक व्यावसायिक आधुनिक हाते कम्प्युटर साथ सशस्त्र, अल्ट्रासोनिक टेप लागू हुन्छ। यसको मद्दत यसलाई कुनै पनि कोठा को परिधि संग मात्र होइन क्षेत्र तर पनि मात्रा गणना गर्न सजिलो छ। वैकल्पिक, आवेदन सेट (मापन लागि उपकरण) planimeter कुनै पनि "एन्ड्रोइड" -device परिवर्तित हुन सक्छ। हामी मापन गर्न परम्परागत टेप उपाय प्रयोग गर्नुहुन्छ भने उचाइ को शुद्धता plumb हुनुपर्छ।
असमान पर्खाल संग कोठा को क्षेत्र कसरी मापन गर्ने? औसत आधारित सबैभन्दा साँघुरो र व्यापक - यो दुई ठाउँमा गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, 2.54 मिटर र 2.60 मिटर औसत को पर्खाल उचाइ 2.57 मिटर (2.54 2.60) बराबर हुनेछ। 2।
एक आयताकार कोठा को गणना को लागि सूत्र
एक कोठा मानक आयताकार आकृति को क्षेत्र गणना गर्न सजिलो तरिका हो। तल को लम्बाइ र चौडाइ: यो गर्न, तपाईं दुई माप बनाउन आवश्यक छ। को भारी वस्तुहरूबाट इलाका खाली, यो सही संकेतक लागि baseboards फुकाल्नु गर्न उचित छ। परिणाम वर्ग मीटर मा व्यक्त गर्नुपर्छ।
कोठा क्षेत्र सूत्र द्वारा निर्धारित: एस एक * ख, एक र ख जहाँ = - को मापन लम्बाइ र चौडाइ छ। यदि एक = 4,75 पु, र ख = त्यसपछि 3.20 मिटर एस = 15,2 वर्ग। एम। द आयाम छत लागि वालपेपर किन्न अनुमति दिन्छ।
wallpapering लागि एक कोठा को क्षेत्र कसरी मापन गर्ने? तपाईं परिधि जान्नु आवश्यक: पी = (a + ख) *2र पर्खालको (घन्टा) को उचाइ। एस पी * घन्टा =। यदि घन्टा = 2,5 m, भन्ने हाम्रो उदाहरण मा एस = 39,75 वर्ग। एम। दोस्रो चरण priming र टाँस्न वालपेपर आवश्यक छैन भन्ने अंश को क्षेत्र घटाउनु छ। अक्सर यो Windows र ढोका छ। उदाहरणका लागि, विन्डो क्षेत्र 1.94 वर्ग छ। पु, र ढोका - 1.18 वर्ग। एम। त्यसपछि तपाईं 36,63 वर्ग मीटर को क्षेत्र मा आपूर्ति किन्न आवश्यक छ। एम।
उनको कोठा को असामान्य आकार समकोणहरू सम्भावित संख्यामा विभाजित गर्न गर्दा प्रत्येक क्षेत्र जोडेको। समकोणहरू बाहेक भने तलको प्रस्तावित सूत्र अनुसार गणना बनाउने, अन्य ज्यामितियआकार हाइलाइट।
वर्ग मीटर मा कोठा को क्षेत्र कसरी मापन गर्न यो एक सर्कल छ भने? सूत्र प्रयोग: एस = पाई * r², जहाँ आर - सर्कल को अर्धव्यास। उदाहरणका लागि, यो 1.5 मिटर त्यसपछि एस = 7,07 वर्ग छ। एम संख्या पाई तीन वर्ण लाग्न सक्छ - 3.14।
कोठा एक त्रिकोण को आकार मा छ भने, यो माथिको चित्रमा प्रतिनिधित्व छ जो बकुल्लो गरेको सूत्र प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। गणना गर्न क्षेत्र सबै तीन पक्ष को आकार सजग हुन र semiperimeter फेला पर्छ। यदि एक = 1,8 पु, ख = 2,3 पु, ग = 1,9 एम semiperimeter हुन3मीटर। सूत्र आकार स्थानापन्न, हामी परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
niches र protrusions संग पर्खालहरु
सामाग्री सही रकम किन्न गणना गर्दा वेंटिलेशन डिजाइन, ledges र niches खातामा लगिनेछ गर्न। तिनीहरूले उपलब्ध हुँदा कसरी एक कोठा को क्षेत्र मापन गर्न? व्यक्तिगत खण्ड को क्षेत्र बाहेक गणना हुनुपर्छ, वा अन्तिम परिणाम थप्न, वा therefrom घटाइँदैन। त्यहाँ पर्खाल मा एक आला छ भने, Wallpapering आवश्यकता, यसको आकार समग्र क्षेत्रमा थप गर्नुपर्छ। यसलाई आफ्नो मूल्य लिनुपर्छ अन्तिम परिणाम मा एक protrusion भइरहेको मरम्मत छत कल्पित गरिएको छ भने।
तैपनि, व्यवसायीक सामाग्री कडाई गणना मा छैन किन्न सल्लाह र 5% थप अवसर खर्च। काम समयमा गर्न अग्रिम खरिद थियो टिप्न सधैं सम्भव छ। नयाँ पार्टी, वा इच्छित रंग को वालपेपर को रंग फरक हुन सक्छ छ पूर्ण स्टक बाहिर।
एक कोठा को क्षेत्र मापन गर्न कसरी को प्रश्नको जवाफ, यो मरम्मत को लागि आवश्यक वालपेपर को राशि को समस्या बच्न असम्भव छ। तिनीहरूले समायोजन आवश्यकता चित्रकला र जटिल संग रङ लगाउन, बिना, बदलिने widths को रोल मा बेचिन्छ। दुवै विकल्प विचार गर्नुहोस्:
नमुना मिल्ने लागि आवश्यकता बिना वालपेपर क्षेत्र कडाई हिसाब गरिन्छ। उदाहरणका लागि, 0.53 मिटर को चयन गरिएको रोल चौडाइ, लम्बाइ, जो को 10 मीटर छ। प्रत्येक रोल को क्षेत्र - 5.3 वर्ग मीटर। 36,63 एम लागि वर्ग पर्खाल क्षेत्र7आवश्यकता रोल (36,63 पु: 5.3 मिटर = 6.9)। आजकल यो दुई रंग वा दुई फरक इनभ्वाइसहरू वालपेपर प्रयोग गर्न फैशन छ। त्यसपछि हामी रोल को मात्र होइन संख्या, तर पनि बैंड खातामा लिनुपर्छ। प्रत्येक रोल4गर्नेछ पट्टी को 2.5 मीटर को एक छत उचाइ संग। आफ्नो अनुक्रम द्वारा परिभाषित, तपाईं निर्णय गर्नुपर्छ तीन मा के रंग वालपेपर प्राप्त हुनेछ, र केही - चार रोल मा। सायद, आफ्नो संख्या वृद्धि गरिनेछ कारण रंग संयोजन गर्न आवश्यकता।
एक कोठा को क्षेत्र मापन गर्न कसरी समस्या समाधान, तपाईं वालपेपर को बाँकी टुक्रा प्रयोग गर्न राख्न सक्छ जहाँ क्षेत्रमा पहिचान। उदाहरणका लागि, एक कोठरी मा। यो कारणले गर्दा कारण 15-30 सेमी को कपडा मा बदलाव, वालपेपर रहने खुला रिक्त स्थान मा प्रयोग गर्नुहोस् असम्भव हुनेछ भन्ने तथ्यलाई छ। त्यहाँ कुनै पनि लुकेका जायदाद छ भने, रोल को संख्या बढ्ने बेला। को प्रयोग भाग दस-रोल को 0.3 मिटर लम्बाइ को विस्थापन मा 8.8 मिटर थियो, र यो खातामा लग्नु गर्नुपर्छ। जीवित ठाउँ 5.3 र 4.66 वर्ग मीटर मा हुनेछ। हाम्रो उदाहरणका लागि एम (36.63 मिटर: 4.66 मिटर = 7.86) अब आवश्यक छ7र 8 रोल।
खातामा सामाग्री को लागत वृद्धि लिएर, यो अनुमानित आंकडे मा परेर, क्षेत्र नाप्ने बिना मरम्मत सुरु गर्न असम्भव छ भनेर दिइएको गणना स्पष्ट देखाउँछ।
लक मुद्दा के हो?
हामी छत बाथरूम मा के राम्रो के पत्ता
कसरी आफ्नै हातले प्लास्टिक ढलान गर्न
विशेष गरी leveling र सिफारिसहरू, चरण निर्देशनहरूको द्वारा चरण: कसरी चित्रकला को लागि पर्खाल तयार
Polypropylene सुझाव मास्टर कसरी मिलाप गर्न
रोल्ड जई देखि घर कुकीहरू
कर्टिस जैक्सन: सिनेमा, जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
ससेज सैंडविच: क्यालोरी। आधारभूत घटक को पोषण मूल्य
रोग। छोराछोरीको मुखशोथ: घर मा उपचार
भानाडियम (रासायनिक तत्व): नाम को इतिहास, अणु को संरचना, को valence
Melolontha - अत्यधिक किरा
विश्लेषण देखाए - यो धब्बा मा leukocytes वृद्धि। यो कस्तो अर्थ राख्छ?
Lamer गर्ने हो? Lamer छ ....
एल ई डी को हुन्? P2P-नेटवर्क बारेमा सानो